Ga na Oge R&D na Mmụta Ọzụzụ | RayHaber | raillynews
HomeGeneralMoga na Oge R&D na Mmụta Ọzụzụ
21 / 05 / 2020 General, Isi akụkọ, OGBU NIILE, Turkey
R&D na agụmakwụkwọ ọkachamara
Mahmut Özer, Mịnịsta Mịnịsta na-ahụ maka agụmakwụkwọ nke mba, gwara akwụkwọ akụkọ banyere atụmatụ ya gbasara ọrịa R&D nke etolite na ụlọ akwụkwọ ọzụzụ aka. Özer kwuru, "Anyị ga-enwe ụlọ ọrụ R&D iri abụọ. Ogige nke ọ bụla ga-elekwasị anya n'akụkụ dị iche. ”
Ajụjụ ọnụ nke osote Mịnịsta nke Educationzer Mmụta iszer dị ka ndị a: "Anyị na-aga ugbu a n'oge R&D na agụmakwụkwọ ọrụ" Mịnịsta Minista Mmụta Mba Özer kwupụtara na nke a ga-abụ otu n'ime arụmọrụ kachasị mkpa nke ntiwapụ 19 na agụmakwụkwọ ọrụ ọrụ, Anyị ga-agbakwunye ndị ọhụrụ na-atụle nkesa. Anyị ga-enwe ụlọ ọrụ R&D iri abụọ. Ogige ọ bụla ga-elekwasị anya na mpaghara dị iche. Dịka ọmụmaatụ, otu etiti ga-emeso naanị ngwanrọ, ebe ọzọ ga-elekwasị anya na teknụzụ ngwaọrụ biomedical. Isi ihe ya ga-elekwasị anya na mmepe ngwaahịa, patent, ihe gbasara ịba uru, imewe ya na imepụta ngwa ahịa, ndebanye aha na azụmahịa. Anyị ga na-abawanye nso ngwaahịa. Anyị ga-eduzi ndị nkuzi ọzụzụ n'ụlọ ọrụ R&D mpaghara a. ” N’ikwu na a ga-emelite usoro agụmakwụkwọ agụmakwụkwọ ngwa ngwa ka usoro maka akpaaka, sọftụwia, teknụzụ ọgụgụ isi mmadụ na nka dijitalụ, Özer kwusiri ike na ebe R&D ga-atụnye ụtụ na mmelite.
Ministri Agụmakwụkwọ Mba (MoNE) malitere nnukwu ọgụ n'ụbọchị a na-ebuso agha Kovid-19 ọgụ. Emeputara otutu onu ahia site na ihe ndi choro tupu ulo akwukwo, site na nkpuchi, site na akwa nche ihu rue ihe ndi ozo. N'ụzọ dị otú a, MEB nyere aka dị oke mkpa maka igbochi oria ọrịa ụbọchị mbụ nke ọgụ ahụ. Mgbe ahụ ọ gara n'ihu na mmepụta igwe eji eme ihe nkpuchi, igwe na-enyocha ikuku, ngwaọrụ laryngoscope si na respirator. N'ime usoro a, nke na-egosi mkpa agụmakwụkwọ ọrụ siri ike dị, Mịnịsta Minista MoNE Mahmut Özer kọwara ụdị ọzụzụ agụmakwụkwọ ga-abụ mgbe ntiwapụ nke kovid-19 gasịrị.
'Anyị metụtara n'ụzọ na-ezighị ezi'
N'oge ụbọchị ndị a na-alụ ọgụ Kovid-19, ọzụzụ ọrụ aka mere nyocha nke ọma. Kedu ihe ị na-eme atụmatụ maka ọdịnihu agụmakwụkwọ ọrụ aka, nke nwekwara ahụmihe na-enweghị atụ?
Agụmakwụkwọ ọrụ aka na-eme ntinye aka dị mkpa site na ịzụlite akụ na ụba mmadụ na ikike nka nke ahịa ọrụ chọrọ ọtụtụ afọ na mba anyị. Agụmakwụkwọ ọrụ aka nwere nkụda mmụọ ọkachasị mgbe ejiri ntinye akwụkwọ rụkọta ọrụ N'oge a, agụmakwụkwọ agụmakwụkwọ akwụsịla ịbụ nhọrọ nke ụmụ akwụkwọ gụsịrị akwụkwọ. N'afọ ndị sochirinụ, ọnọdụ nke abụọ gbagọrọ agbagọ na ntinye akwụkwọ isi oche n'ụlọ akwụkwọ niile. Kedu ihe mere mgbe ngwa ọrụ ọnye ozi ahụ malitere imeghachi, agụmakwụkwọ ụlọ ọrụ ọzọ ghọrọ nhọrọ mmanye maka ụmụ akwụkwọ na-enweghị ihe ịga nke ọma. Usoro ndị a metụtara ọnọdụ mmụọ nke ndị njikwa anyị na ndị nkuzi ụlọ akwụkwọ kọleji anyị. Aghọtara ọzụzụ agụmakwụkwọ maka nsogbu, agụghị akwụkwọ ụmụ akwụkwọ, na mmejọ nke inye ọzụzụ. N’ihi nke a, ike nke ndị gụsịrị akwụkwọ n’iru imezu atụmanya nke ahịa aka mere ka echiche na-ezighi ezi banyere agụmakwụkwọ ọrụ. Ya mere, enwere nnukwu ntụkwasị obi onwe onye na agụmakwụkwọ ọrụ.
'Onwere nwere ntụkwasị obi'
Egoghachiri ntụkwasị obi onwe onye na usoro a?
Kpamkpam. Ihe kachasị mkpa nke usoro a bụ iji nwetaghachi ntụkwasị obi onwe gị n’ụbọchị ndị mbụ a ma ama agụmakwụkwọ agụmakwụkwọ. O gosiputara ihe o puru ime mgbe edozi nsogbu ya, nye ya ohere na mkpali. N'ime usoro a, ọ bịara n'ichepụta ikike ya na imepụta ya, ọ bụghị nsogbu agụmakwụkwọ agụmakwụkwọ. Ka ụlọ ọrụ mgbasa ozi nke mba na mba na-etinyekwu ihe ịga nke ọma, ntụkwasị obi onwe onye na-abawanye. Dika nkwenye n’ihe ha puru ime, meputa, na ihe ha n’eweta bara uru, ihe biara n’iru ya.
'Oghe a ga - elekwasị anya n'otu mpaghara'
Ogwe maka R&D ga-adịgide na ụbọchị mgbe ọnwu Kovid-19 gasịrị?
Agụmakwụkwọ ọzụzụ ọrụ, anyị na-aga ugbu a n'oge R&D. Nke a ga - abụ otu n'ime ọrụ kachasị mkpa nke ntiwapụ Kovid-19 maka agụmakwụkwọ ọrụ. N'ime usoro a, anyị ga-agbakwunye ndị ọhụrụ na ogige R&D anyị guzobere, na-eburu n'uche nkesa mpaghara. Ọ na-aga imezu ọmụmụ ihe ndị a. Anyị ga-enwe ụlọ ọrụ R&D iri abụọ. Ogige ọ bụla ga-elekwasị anya na mpaghara dị iche. Dịka ọmụmaatụ, otu etiti ga-emeso naanị ngwanrọ, ebe ọzọ ga-elekwasị anya na teknụzụ ngwaọrụ biomedical. Ogige ndị ahụ ga na-ezirịta ozi mgbe niile ma na-akwado ibe ha. Ogige ndị a ga-abụkwa ebe dị mma. Isi ihe ya ga-elekwasị anya na mmepe ngwaahịa, patent, ihe gbasara ịba uru, imewe ya na imepụta ngwa ahịa, ndebanye aha na azụmaahịa. Anyị ga na-abawanye nso ngwaahịa. Anyị ga-eduzi ọzụzụ ndị nkuzi n'ụlọ ọrụ R&D mpaghara a. Oru nchikota aka a gha eso tinye aka di elu na imelite akwukwo akwukwo.
Ha tụkwasịrị ntụkwasị obi obi
Anyị nwere ike ịsị na ntinye ego nke MEB mere ka agụmakwụkwọ ọrụ aka kemgbe afọ abụọ amịala mkpụrụ.
Ee. Dị ka ozi, anyị lekwasịrị anya na agụmakwụkwọ ọrụ aka. Anyị ahụla ọtụtụ ọrụ dị mkpa otu mgbe. Nke kachasị mkpa, na nke mbụ, anyị ejiriwo ndị nnọchianya siri ike na ngalaba dị iche iche rụọ ọrụ nkwado zuru oke. Ya mere, obi ike ndi aka na ngalaba ulo oru a abawanyela nke nta nke nta. Usoro ndị a niile mere ka e nwee ike mepụta nzaghachi ngwa ngwa, mkpokọta na ike na usoro a.
Kedụ ihe ị ga - eme site ugbu a gaa n’ihu?
Anyị ga-aga n’ihu na-eme ka usoro izi ihe-nke imepụta-ọrụ na ọzụzụ ọrụ aka, pụta. Anyị ga-emelite ọzụzụ ahụ mgbe niile na mmekọrịta siri ike na ahịa ọrụ. Anyị ga-eme ụlọ akwụkwọ sekọndrị anyị ga-abụ ụlọ ọrụ mmepụta. Anyị ga-amụba nrụpụta nke ngwaahịa na ọrụ dị iche iche, ọkachasị n'ime oke ịgbanye ego. Dịka ọmụmaatụ, na 2019, anyị mụbara ego anyị nwetara site na nrụpụta na mpaghara a site na pasent 40 ruo 400 nde TL. Na 2021, ebumnuche anyị bụ 1 ijeri TL mmepụta. Ihe kachasị mkpa bụ iji melite ikike ọrụ na ọnọdụ ọrụ nke ndị gụsịrị akwụkwọ n'ahịa ọrụ. Nmekorita nke anyi guzobeworo na akuku na ndi nwere mkpa oru bu uzo mbu anyi no n’ebe a. Stepszọ ndị a ga-aga n’ihu na-esikwu ike.
'A rụpụtara ngwaahịa niile anyị lekwasịrị anya'
Havetọbala ụlọ ọrụ R&D n'ụlọ akwụkwọ kọleji. Gịnị bụ nzube ya?
Onyinye nke ọzụzụ aka ọrụ n'oge ị lụsoro Kovid-19 bụ okpukpu abụọ. Ihe izizi a gụnyere imepụta oke na iwepụta nkpuchi dị mkpa, ndị na-egbochi ọgwụ, mmiri na-eche nche ihu, apron disposable na overralls. Uzo a gara nke oma ma mmeputa ihe n’onodu a ka na-aga n’ihu. Uzo abuo a lebara anya n’icheputa na imeputa ngwa ndi di iche iche dika igwe ndi nkpu na igwe ihe nkpuchi kwesiri ibu agha nke kovid-19. Iji nwee ihe ịga nke ọma na ọkwa nke abụọ, anyị guzobere ụlọ ọrụ R&D n'ime ụlọ akwụkwọ ọrụ aka ọrụ na ụzụ Anatolian na mpaghara anyị nwere akụrụngwa siri ike. Anyị mere ka akụrụngwa nke R&D emmepe anyị maka chepụta na imepụta ngwaahịa ndị a. Emere omumu ihe omimi nke oma n’ulo ebe a anyi hibere n’ulo anyi ndi dika Istanbul, Bursa, Tekirdağ, Ankara, İzmir, Konya, Mersin, Muğla na Hatay. N'ime ụlọ ọrụ ndị a, anyị mechara wepụta ngwaahịa niile anyị lekwasịrị anya. N'ọnọdụ a, e mepụtara ma mepụta ọtụtụ ngwaahịa dịka igwe sọks ịwa ahụ, akụkụ iku ume, igwe nrụaka ọkọlọtọ N95, ngwaọrụ laryngoscope, ihe eji elekọta mmadụ, igwe ikuku, igwe nyocha.
Imekorita ya na ITU-ASELSAN
N'ịtụle maka mmelite nke usoro mmụta, ị ga - eme mmelite ọhụụ, na-atụle na ahịa ọrụ ga-amalite kwa mgbe ọ gbasasịrị Kovid-19?
N'ezie. Mgbe usoro a gasịrị, a ga-enwe mmeghari ohuru nke usoro mmụta maka nka dijitalụ. Anyị anaghị elele ụlọ akwụkwọ agụmakwụkwọ na ọrụ aka dị ka ụlọ ọrụ ebe a na-enye naanị ọzụzụ agụmakwụkwọ. Anyị chọrọ ka ụmụ akwụkwọ anyị niile nweta nkà dị iche iche ka ha wee nwee ike imeghari na ọnọdụ teknụzụ na mmekọrịta ọha na eze na-agbanwe agbanwe. Anyị chọrọ ibelata ọdịiche dị n’ọrụ agụmakwụkwọ na agụmakwụkwọ n'ofe oge. Ya mere, anyị na-arụkọ ọrụ ọnụ na ụlọ ọrụ ma teknụzụ siri ike dịka ITU na ASELSAN. Agamakwukwo amammuhu di ka ọkwa teknụzụ dị n’ọrụ ọrụ a ga-agbakwunye na usoro ọmụmụ na ọrụ niile anyị na-akụzi. Agbanyeghị, anyị agaghị enwe afọ ojuju na nke a, kama anyị ga-arụ ọrụ iji mee ka ọgụgụ isi nke ndị gụsịrị akwụkwọ sie ike.
Oge njem njem na-amalite na Kocaeli
Debanye aha akwụkwọ na ebe a na-asụgharị n'efu
Ụgbọ njem ndị mmadụ na Sakarya na-agafe oge ndebanye
Ndị na-enyere TCDD aka na Education
Usoro okporo ụzọ ọhụrụ na Halkapınar
Nkwụsịtụ ikpeazụ na Konak Tram
Mmadụ iri puku mmadụ iri na isii na 120 jiri njem abalị gaa na Antalya ... 9 Na-amalite na Winter Plan na September
Onye isi njikwa TÜVASAŞ İbrahim Ertiryaki ga-ehiwe nkwekọrịta azụmahịa na mba ndị agbata obi.
Sakarya amalite oge nyocha maka njem ụgbọ elu ka ukwuu
MOTAŞ dị njikere maka agụmakwụkwọ ọhụrụ
MGBE NWA RAILWAY NA-EBIRI SECTOR
teknụzụ eji eme biomedical
Schoolslọ akwụkwọ agụmakwụkwọ ọrụ aka
R&D hiwere ụlọ akwụkwọ sekọndrị ọrụ
N95 igwe nkpuchi
ngwaọrụ laryngoscope video
teknụzụ ọgụgụ isi mmadụ
Nnukwu ụlọ ndaba